Fitaovana famafazana tranonkala manasongadina ny rohy rehetra avy amin'ny pejy iray - toro-hevitra
Mafy foana ny fampifandraisana rohy avy amin'ny tranonkala. Mila maka tahaka ny iray amin'ny iray ianao, ary tsy misy dikany izany. Na dia izany aza dia misy fandaharan-tranonkala sasantsasany entina hanesorana ireo rohy rehetra avy amin'ny tranonkala tianao sy ny bilaogy tsy misy olana. Ny ampahany tsara indrindra dia ny fampidirana ireo programa ireo amin'ny IE, Firefox, Chrome, ary Safari browsers.
IWebTool Link Extractor dia rindrambaiko malaza amin'ny Internet ary Firefox extension. Izany dia hanampy ny angon-drakitra mivantana eo amin'ny milina. Rehefa tafapetraka sy mavitrika ny programa, dia hanamora kokoa ny famerenan-dabozana sy ny fibrestera ity programa ity. Ny fampindrana ny angona avy amin'ny famoaham-baovao, ny vavahadin-tseranana ary ny toeran'ny varotra dia tsy mora mihitsy. Amin'ny alalan'ity rindrambaiko ity dia afaka manao asa be dia be ianao raha tsy misy olana. Manome alalana dimy monja isaky ny ora izy io ary fantatra fa miasa tsara ny fitaovana. Ny sasantsasany amin'ireo safidy malaza ireo dia ny Lohateny sy ny bokotra an-tsoratra ary ny pejy Google Rankings.
Tsy hoe Firefox afa-manampy fotsiny ihany fa programa tsara ihany koa. Manisotra rohy izy ary mamerina ny angon-drakitrao avy amin'ny tranokalan-tserasera, fehezam-pejy RSS, bilaogy sy media profiles tsy misy olana. Manome safidy hanivanana ny angon-drakitra mifototra amin'ny toetra amam-panatanterany izy ireo. FireLink Report dia miasa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny rohy sy ny fanavaozana ny tahiry.
Ny SEM Link Extractor koa dia malaza amin'ny fitrandrahana rohy sy ny tranonkala manala ny tranonkala. Io no iray amin'ireo programa mora indrindra sy tsara indrindra handraisana ireo rohy rehetra avy amin'ny tranonkala iray. Ny fitaovana nentim-paharazana ataony dia hahamora kokoa ny fampiharana azy. Na tianao te hikotika ny angona avy amin'ny rohy tsotra na ny fanatanterahana ireo tetikasa fanangonam-baovao sarotra, ity programa ity dia hanao ny zava-drehetra ho anao raha tsy misy olana.
SEOquake Link Extractor dia fampiharana amin'ny Internet. Tsy mila mandefa maimaim-poana izy, ary afaka mahazo tombony amin'ny Internet ianao. Manampy anao handefa ny rohy rehetra avy amin'ny pejy Internet manokana sy ny crawls ary manaisotra ny angon-drakitra. Ity dia hampiseho ny harenan'ny rohy amin'ny endriky ny tranonkala Google sy ny pejy fantatro.